नेपाल आज | किन चर्किदै छ विप्लव नेकपामा अन्तर्विरोध?
किन चर्किदै छ विप्लव नेकपामा अन्तर्विरोध?
काठमाडौं । नेपाल बन्द आह्वान सफल पार्न बम विस्फोट गराउने क्रममा कार्यकर्ताको मृत्यु भएको घटनालाई नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाभित्र नयाँ ‘सेक्टर काण्ड’ का रूपमा अर्थ्याउन थालिएको छ । सैन्य तालिम, सामान्य युद्धको नियमसमेत थाहा नभएका कार्यकर्तालाई विस्फोट गराउन निर्देशन दिँदा ठूलो क्षति पुगेको चन्द समूहको निष्कर्ष छ । ‘यो कारबाही अपरिपक्व हो । यो नयाँ ‘सेक्टर काण्ड’ जस्तो भएको छ,’ एक स्थायी समिति सदस्यले भने । २०४४ मा तत्कालीन नेकपा मसालका महासचिव मोहन वैद्यको नेतृत्वमा उपत्यकाका ४र५ प्रहरी सेक्टरमा भएको दोहोरो भिडन्तमा प्रहरी र पार्टी कार्यकर्ता घाइते भएका थिए । पञ्चायती व्यवस्थामा उपत्यकामा प्रहरीमाथि हमला गर्दा कार्यकर्ता पक्राउ परेका थिए । त्यसलाई कम्युनिस्टहरू क्रान्ति गर्दाको असफल प्रयास (सेक्टर काण्ड) का रूपमा चित्रण गर्छन् ।
त्यसको ६ महिनापछि महासचिव वैद्यले पदबाट राजीनामा गरी पुष्पकमल दाहाललाई जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यही घटनाको जस्तो अवस्था अहिले देखा परेको भन्दै चन्द समूहभित्र अन्तरविरोधसमेत चर्किएको छ । युद्ध गरेर जित्ने अवस्था नरहेको भन्दै एकथरी नेता र कार्यकर्ता वार्तामा जानुपर्ने पक्षमा छन् । गत साता बन्दको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडौंमा विस्फोटका लागि सामग्री तयार पार्दा चार कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । एक जना घाइते ओम अस्पतालको आईसीयूमा जीवनमरणको दोसाँधमा छन् । उनको अहिलेसम्म ठेगाना पत्ता लागेको छैन । परिवार सदस्य सम्पर्कमा आउन सकेका छैनन् ।
रिहाइका लागि आफ्नै पार्टी सम्बद्ध विद्यार्थी नेता चिरिञ्जीवी ढकाललाई पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईमार्फत सरकारसँग सम्पर्क सूत्रका रूपमा पठाएको आरोपसमेत उनीमाथि लागेको थियो । त्यसले पनि पार्टीमा विवाद चुलिएको थियो । यसरी सूचना चुहाएको, पार्टीको आधिकारिक लाइनविरुद्ध सरकारसँग वार्ता गर्न मौखिक सहमति गरेको आरोपपछि स्थायी कमिटी बैठकले विश्वकर्मालाई मध्य कमान्ड इन्चार्जबाट हटाएको थियो । करिब डेढ महिनाको निलम्बनपछि स्थायी कमिटी बैठकमा आत्मालोचना गरेपछि पुनः विश्वकर्मालाई मध्य कमान्डको जिम्मेवारी दिइएको थियो । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो ।
विप्लव सेक्टर काण्ड